တရားတော် – Myitter
ဘဝမှာ ဒုက္ခဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးယူရလောက်အောင် စိတ်ချမ်းသာချင်ရင် ဒီ ဂါထာတော်တွေကိုသာ ဆောင်ထားလိုက်ပါ…
March 14, 2018 Myit Ter 0
ရွတ်ဖတ်သူအပေါင်း လောကီ ။ လောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသော အကျိုးထူးများ ရရှိခံစားရ၍ သက်ရှည်ကျမ်းမာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေပာု ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလျက်…
“သရဏဂုံစွမ်းရည် အသက်ရှည်” …! (ကိုယ့်တွေ့ ဖြစ်ရပ်လေးပါ..)
March 8, 2018 Myit Ter 0
Zawgyi ဒေါ်ခင်မေ နေထိုင်သည်က ရွှေပြည်သာမြို့၊၅/၅-ရပ်ကွက်၊ နှင်းဆီပန်းခြံ။ယခု ဒေါ်ခင်မေအသက် ၆၀-ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ “သရဏဂုံသုံးပါးမစွဲမြဲခဲ့ရင် အဒေါ့်အသက်ဟာ၄၀-လောက်ကတည်းက သေနေပါပြီ” ဟု ဒေါ်ခင်မေကအိမ်နီးချင်းများကို မကြာခဏ ပြောပြလေ့ရှိသည်။ ဒေါ်ခင်မေ ပြောပြမည် ဆိုလျှင်လည်း ပြောပြချင်စရာပင်။ ဒေါ်ခင်မေအသက် ၄၀-အရွယ်ခန့်က သေလုမျောပါးရောဂါတစ်ခုဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ရ၏။ ရောဂါ ပြင်းထန်လွန်းအားကြီးသဖြင့်ရုတ်တရက်မေ့မျောသွားခဲ့သည်။ဒေါ်ခင်မေ၏ […]
လူနာ အနားမှာ ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ကျပါ. . .
January 14, 2018 Myit Ter 0
တစ်နေက . . . ၊ ကျွန်မတို့ တိုက်အောက်ထပ်မှာနေတဲ့ ၊ခင်မင်ရတဲ့ ကြီးကြီးတစ်ယောက် အတော်လေး မကျန်းမမာဖြစ်နေလို့ သတင်းသွားမေးဖြစ်တယ် ။ အိပ်ယာထဲလဲနေတာ ကြာပါပြီ … လူကြီးရောဂါပေါ့ ။ အသက်က 74 နှစ်ဆိုတော့ အိုနာ လို့တောင် ပြောလို့ရနေပါပြီ ။ […]
🙏 ဘုရားဂုဏ်တော် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအကျိုး🙏
January 13, 2018 Myit Ter 0
🙏 ဘုရားဂုဏ်တော် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအကျိုး🙏 ပုထုဇဉ်လူသားအပေါင်းတို့သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စား၊ ဝတ်၊ နေ၊ ရေး အရေးကြီးသုံးပါးကို ဆောင်ရွက်နေကြ၏။ ဉာဏလုပ်သားများကလည်း ဉာဏအလျှောက် ကာယလုပ်သားများကလည်း ကာယအလျှောက် လုပ်ကိုင်နေထိုင်ကြရ၏။ ထိုအလုပ်ခွင်တွင် ကာယလုပ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဉာဏလုပ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကုသိုလ်စိတ်ရိုင်းများ မဝင်စေရန် ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကို စိတ်ထဲမှာ ပွားနေလျှင် ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီး […]
လက်ငင်းအကျိုးပေးအောင် ပဋ္ဌာန်းပူဇော်နည်း စံချိန်ကိုက်ရွတ်ဖတ်နည်း (၄)နည်းရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ……. (၁)ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းစေမည်။ (၂)အချိန်မှန်မှန်ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၃)ပီပီသသ အသံကျယ်ကျယ်ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၄)ပြီးလျှင် အမျှဝေ မေတ္တာပွားရမည်။ အဓိပ္ပာယ်အကျယ်- (၁) ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းစေရမည်။ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်လျှင် အနီးနားရှိ နတ်ဗြဟ္မာများ တရားနာလာကြသည်။ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်သူက နံစော်နေပါလျှင်ပဋ္ဌာန်းတရားနာသည့် နတ်ဗြဟ္မာတို့က နှာခေါင်းရှုံ့သွားပြီး ပြန်သွားကြသည်။သို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းပါစေ။ချွေးစော် ချေးညှိစော် […]
ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်ဆိုသော အလွန်အကျိုးပေးသည့် ဘုရားရှိခိုး
လာဒ်တိတ်နေသူများ ၊ ဈေးရောင်းမကောင်းသူများ ၊ အကြွေးမရသူများ ၊ အကြွေးမဆပ်နိုင်သူများ ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ်နေသူများ ၊အကြီးအကဲနဲ့ အဆင်မပြေသူများ ၊ အလုပ်အကိုင် တို့လို တန်းလန်း ဖြစ်နေသူများ ၊ လာဒ်ရွှင်ငွေဝင်လိုသူများ အတွက်အလွန်တရာမှ လာဒ်ရွှင်စေသော ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်သော ဂါထာကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ…. […]
ငွေကြေး အခက်အခဲ တွေ့တဲ့အခါတိုင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရွတ်ဆိုလိုက်ရင် ချက်ချင်းပြေလည်သွားစေတဲ့ လာဘ်ရွှင် ဂါထာတော်
January 12, 2018 Myit Ter 0
ဒီ အချက်တွေလိုက်နာနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် ငွေကြေး လာဘ်လာဘကံပွင့်ဖို့ မဝေးတော့ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါပြီ။ အလုပ်မရှိပဲနှင့်တော့ ငွေကြေးများများ လိုချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်ဆိုနေတဲ့ ငွေကြေးကံများ ရသင့်လျှက်ကြန့်ကြာနေသော ငွေကြေး လာဘ်လာဘများအပြင်အခြားသော နေရာများမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ကံ နှင့် ကိုယ့်ရဲ့ သဒ္ဒါတရားပေါ် မူတည်ပြီး ငွေကြေးလာဘ်လာဘများ ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ ၂၄ရက်ပြည့်ပြီးရင် တစ်ပတ်နားပြီး […]
ရှဲယူထားပြီး တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ သင့်အတွက် အခက်အခဲဆိုတာ မရှိတော့ပါ။ (သိကြားမင်း ဂါထာတော်)
January 11, 2018 Myit Ter 0
တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင်ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါလား… #သိကြားမင်း ဂါထာတော် တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ သာသာဓိကု ၊ […]
“ဆိုက်ကားစီးသော နိုင်ငံကျော်ဆရာတော် (သို့) ဒေါသဖြစ်စရာနှင့် ကြုံပါလျက် ဒေါသမဖြစ်တဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု”
January 5, 2018 Myit Ter 0
မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်ဆိုရင် တစ်ခါက မန္တလေးမြို့က ညတရားပွဲပင့်ထားတယ်။ အစီအစဉ်ကတော့ ဆရာတော်က မင်းကွန်းကနေ မန္တလေးဆိပ်ကမ်းဘက် စက်လှေနဲ့ ကြွလာရမယ်။ တရားပွဲကျင်းပမယ့်သူများက မန္တလေးဆိပ်ကမ်းကနေ ကားနဲ့ကြိုမယ်ပေါ့။ ဆရာတော်ကြီးလည်း ညနေခြောက်နာရီခွဲလောက် မန္တလေးဆိပ်ကမ်းလည်း ရောက်လာရော လာကြိုတဲ့ ကားတစ်စီးမှ မရှိဘူး။ ကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် နောက်ကျတာ ဖြစ်မှာပါ ဆိုပြီး ဆရာတော်ကြီးက […]
လူနာ အနားမှာ ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ပါ . . .
December 27, 2017 Myit Ter 0